Inuu saameyn waara ku yeesho maskaxda dhagaystayaashaada. Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ayaa ah in aan loo seexin isaga oo is xigxigay 80s Muuqaalkan ayuu qoraagu ku tusayaa sida loo helo wax ka badan natiijooyin cajiiba. Dib loo eegay dhowr aasaasi ah PowerPoint 2019. Koorso shaki la'aan kuu oggolaan doonta in laguu arko inaad tahay qof ku soo baxay qaab-dhismeedka iyo nuxurka.
Tilmaamaha PowerPoint 2019: Buug-hawleedka Naqshadeynta Janaayo 5th, 2021Tranquillus
READ #XILDHIBAAN: socod xisaabeed
horeGobollada dhinacooda, xiriirada dhismaha ee xirfadleyda ah waxaa ka go'an inay dhiirrigeliyaan dib u bilaabidda howlaha, shaqaalaynta iyo tababarka xirfadeed ee qaybta dhismaha.
socdaLiistada qaaska ah ee Excel 2010